मौलिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रकाश सपुत - मनोरञ्जन खबर
मौलिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रकाश सपुत
काठमाडौं : चर्चित गायक प्रकाश सपुत पछिल्लो समय लोकप्रिय छन्। उनले गाएका गीत सबैको मुख-मुखमा झुन्डिन्छन्। उनका 'गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर', 'बोल माया बोल', 'मेरो पनि हैन र? यो देश', 'कुरा बुझ्नुपर्च' लगायतका गीतले दर्शकमाझ चर्चा कमाएको छ।
एक महिनाअघि मात्रै बजारमा आएको गीत ‘कुरा बुझ्न पर्च’ले युवा वर्गलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ। टिकटदेखि सामाजिक सञ्जालमा गीत निकै चर्चित भएको थियो। यसै विषयवस्तुलाई लिएर अन्नपूर्ण पोस्टले गायक प्रकाश सपुतसँग अन्तरर्वाता गरेको छ।
आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिले सुटिङ भइरहेका छन्। दसैंका इभेन्ट अलि अलि भइरहेका छन्। त्यसैमा व्यस्त छु।
तपाईंको गीत किन सबैको मुखमुखमा झुन्डिन्छन्?
दर्शक, श्रोताको विश्वासको कारण पनि हो। उहाँहरुले मेरो गीत मनैदेखि मनपराउनुहुन्छ। मैले गीतमा कहीँ न कहीँ मानिसको जनजीवनका कुराहरु जोडिदिएको कारण पनि मान्छेहरुलाई आफ्नो लागेको हुनसक्छ। अर्को कुरा एकदम आफ्नो लागेको मान्छेको लामो समयसम्म पनि माया लाग्ने भने जस्तै त्यो विश्वासको कारण भएको जस्तो लाग्छ।
तपाईंको गीत लोकप्रिय हुनुको कारण के होला?
त्यो त मलाई थाहा हुँदैन है । तर आफू श्रोताको हिसाबले गीत सुन्दा जुन गीतले अलिकति मन छुन्छ त्यही गीत मनपर्छ। त्यसरी नै दर्शक, श्रोताले पनि गीत मनपराइदिएका हुनसक्छ।
एउटा गीतको लागि कति समय खर्चिनुहुन्छ ?
म चाँही एउटा सिर्जनालाई लामो समयदेखि मनमा राखेर हिंडिरहेको हुन्छु। मनमा सोच्दै कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हिंडिरहेको हुन्छु। गीत तयारी गर्न मलाई एक वर्षसम्म नै लाग्छ।
‘कुरा बुझ्न पर्च’भन्ने गीत तयार पार्न कति समय लाग्यो?
लगभग त्यसको कन्टेन्ट नै दुई वर्षदेखि थियो। त्यसको स्क्रिप्ट लेखन मैले एकवर्षदेखि गरिराखेको थिएँ। गीत निकाल्न दुई महिना लाग्यो।
तपाईका गीत केमा आधारित हुन्छन्?
मेरा गीत प्राय कथामा नै आधारित छन्।
कथामा आधारित रहेर गीत बनाउँदाको राम्रो पक्ष के होला?
यसको राम्रो पक्ष भनेकै कहिलेकाहीँ गीत कमजोर भयो भने कथाले मान्छेलाई छुन्छ। यसले गीतप्रति मान्छेलाई आकर्षित साथै आत्मीय फिल गराइदिन्छ।
तपाईंको गीत सुन्दा, हेर्दा अनुसन्धान गरेर मात्र बनाए जस्तो लाग्छ किन?
यस्तो अनुसन्धान भन्दा पनि जीवनको भोगाइ हो। जीवनसँगै भोग्दै आएँ, अनुवोध गर्दै आएँ, सुन्दै आएँ । त्यसले गर्दा ती कुरा भइरहेका कुरा हुन् है भनेजस्तो लाग्छ। आफ्नो अनुभवसँगै आफूले देखेका कुरासँग जोडिएका हुन्।
पछिल्लो समय बजारमा आएको गीतमा कत्तिको विकृति देख्नुभएको छ कि छैन?
गीतमा विकृति आयो भनिरहँदा समाजमा विकृति आको छ कि छैन त्यो बुझ्नुपर्छ। समाज चेन्ज भएको छ कि छैन? समाजमा परिवर्तनसँगै संगीतमा पनि परिवर्तन हुन्छ। समाज ऐना भनिन्छ संगितको। गीतसंगितका क्षेत्र भनेको मनोरञ्जनका हिसाबले फराकिलो क्षेत्र मानिन्छ। सबैको फरक फरक विचार, सोच हुन्छ। समाजको विकृतिलाई सकारात्मक तथा नकारात्मक कसरी देखाउने भन्ने हुन्छ। तर कुनै गीतले मानिसलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ भने त्यस्तो गीत बनाउनुहुँदैन।
गीत बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
श्रोताको पनि आफ्आफ्नै रुचि हुन्छन्। कसैलाई आँसुको गीत मनपर्छ भने कसैलाई हाँसोको त कसैलाई गम्भीरताका गीत मनपर्न सक्छ। त्यसलाई कसरी उतार्दा समाजमा सकारात्मक म्यासेज जान्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। कुन विषयवस्तुलाई समट्ने ध्यान दिनुपर्छ। विषयवस्तुलाई छनौट गरिसकेपछि त्यसलाई सकारात्मक, नकारात्मक कसरी राख्न सकिन्छ भनेर ख्याल राख्नुपर्छ।
तपाईंको गीतमा एक स्थानीय ठाँउ, स्थानीय बासिन्दालाई नै रोज्नुको कारण के हो ?
उहाँहरुसँग सजिलै जोडिन सकिन्छ। उहाँहरु रियल लाग्छ। उहाँहरुबाट नै वास्तविकता देखाउन सकिने भएकोले पनि रोजिएको हो।
तपाईको गीतमा ठेट भाषाहरु नै प्रयोग हुन्छ। किन? यसले गीतमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
गीतलाई राम्रो प्रभाव पार्छ। म गाउँबाटै आएँ। मैले त्यही भाषा बोल्दै आएँ। मैले जानेकै यहीँ हो। यो मौलिकता मानिसहरुलाई मनपर्छ। यो हाम्रो सुगन्ध हो।
पछिल्लो समय बजारमा आएका तपाईंका गीतमा दर्शक श्रोताको कस्तो प्रतिक्रिया छन्?
सबै गीतको आफ्आफ्नै प्रतिक्रिया हुन्छन्। पछिल्लो समयमा बजारमा आएको ‘कुरा बुझ्नु पर्च’ भन्ने गीतको राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ। विशेष गरी युवा महिला दिदिबहिनीहरुले यो गीतलाई मनपराई दिनुभएको छ। पुरुष भएर महिलाका कुराहरु लेखिदिएकोमा धेरैले यो गीतलाई रुचाउनुभएको छ।
गीत तयार पार्दा के के चुनौतीहरु आए?
काम नै यही भएकोले खासै चुनौती भन्ने त केही हुँदैन। कतिपय अवस्थामा समयको हिसाबले, कलाकार टिम जुटाउनुपर्ने, लगानी जुटाउनुपर्ने बेला चुनौती आए।
गीतमा कसरी लगानी जुटाउनुहुन्छ ?
व्यवसायिक हिसाबले सशक्त नभएको कारण लगानी जुटाउन गाह्रै हुन्छ। प्राय जसो आफ्नै लगानी हुन्छ।
अभिनेता राजकुमार राओ विवाह बन्धनमा
मिथिलामा छठपर्व, ‘खरना’ को तयारी
हाम्रै गाउँको परिवेशमा तिहार गीत बजारमा
खराब माैसमका कारण भारतीय चलचित्र छायाङ्कन टोली लुक्लामै रोकियो
अभिनव चौहानको अभिनयमा नयाँ गीत बजारमा